बिदेशमा भएका पतिले आफ्नी श्रीमति हीरा बेहुलीको भेषमा निस्केको तस्वीर देखेपछि……. – List Khabar
Home / Uncategorized / बिदेशमा भएका पतिले आफ्नी श्रीमति हीरा बेहुलीको भेषमा निस्केको तस्वीर देखेपछि…….
admin December 26, 2021 Uncategorized, मनोरंजन Leaveacomment 114 Views
बिहेका बेलामा गरिने श्रृंगार एक पटक मात्र हुन्छ । त्यसपछि बिहे भएर दुलही बनेपछि यस्तो सिंगार सधैं गरिँदैन । तर रहर र शौख मानिसमा हुने विचित्रको स्वभाव हो । केही मानिस शौख पुरा गर्ने चक्करमा कैयौँ आश्चर्यका काम गर्न पुग्छन् । त्यस्तै पाकिस्तानकी एक महिला आफ्नो शौख पुरा गर्न हरेक साता बेहुली बन्ने गरेकी छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो होला तर सत्य हो । उनका पति भने उनीसँग नभएर बेलायतमा रहेका छन् ।
पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्त निवासी यी महिला विगत १६ वर्षदेखि हरेक शुक्रबार सोह्र श्रृंगार गरी बेहुली बन्ने गरेकी छन् । पाकिस्तानको लाहौरमा बस्ने हीरा जीशान ४४ वर्षकी भइन् । उनी हरेक साता श्रृंगार गरेर बेहुलीको पहिरन लगाउँछिन् । हात र खुट्टामा मेहन्दी, बेहुलीको पोसाक र गहना लगाएर उनी दिनभर सजिएर बस्छिन् ।
हीराका अनुसार १६ वर्ष पहिले उनकी आमा गम्भीर बिमारी भइन् । जसका कारण उनकी आमालाई अस्पताल भर्ना गर्नु परेको थियो । आमा गम्भीर भएपछि म ‘र्नु अघि छोरीको बिहे हेर्ने इच्छा जाहेर गरिन् । आमाले आफूलाई रगत दिने व्यक्तिसँग विवाह गर्न छोरीलाई भनेकी थिइन् । हिराले यसलाई स्विकार्दै विवाह गर्न तयार भएको बताइन् ।
बेहुलीको पहिरन नलगाई अस्पतालमा हिराको साधारण विवाह भयो । हिराको बिदाइसमेत रिक्सामा भएको थियो । जीवनको महत्त्वपूर्ण दिन बेहुली बन्दा पनि पहिरन लगाउन नपाउँदा हिरा निराश बनेकी थिइन् ।
हीराका अनुसार उनको विवाहको केही दिनमा नै आमाको मृत्यु भयो । विवाहपछि हिराको ६ सन्तान भए तर दुई सन्तानको मृत्यु भयो । जसका कारण उनी डि ‘प्रे ‘स नमा गइन् । सोही बाट बाहिर आउन उनी प्रत्येक शुक्रवार बेहुली बनेर सजिने गरेको बताउँछिन् । हीराका पति बेलायतमा बस्छन् । हिरा भने आफ्नो सन्तानका साथमा पाकिस्तानमा बस्दै आएकी छन् । पतिसँगको दुरीको पी डा भुलाउन पनि हिरा हरेक शुक्रवार बेहुली बनेको बताउँछिन् । यसो गर्दा खुसी मिल्ने र एक्लोपन महसुस नहुने उनको दाब‍ा छ ।
Previous पुस ११ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Next मान्छेको जस्तै दाँत भएको माछा फेला, देख्ने सबै चकित परे!